Xiddig Ka Ciyaara Premier League Oo Ka Qayb-galay Xaflad Dhaqan-xumo Ah Xilli Fayraska Korona Loo Mamnuucay Isku Imaatinka Bulshada - Gool24.Net
Xiddig Ka Ciyaara Premier League Oo Ka Qayb-galay Xaflad Dhaqan-xumo Ah Xilli Fayraska Korona Loo Mamnuucay Isku Imaatinka Bulshada
Xiddiga kooxda Wolves ee Morgan Gibbs-Whit ayaa lagu soo rogayaa ganaax kaddib markii uu ka qayb-galay xaflad dhaqan xumo ah oo ay kasoo xaadireen qalanjooyinka Jasiiradda jacaylka UK ee Love Island ee Georgia Steel iyo Elma Pazar.
20 jirkan oo marka koowaad jabiyey sharciga kala-fogaanshaha bulshada ee lagu xakamaynayo xanuunka Farayska Korona, ayaa waxa kale oo uu ku lug yeeshay falkan dhaqan xumada ah ee ka mamnuuca ah in laacibiintu ku kacaan, kaas oo muuqaalladiisa lagu baahiyey baraha buslahda.
Morgan Gibbs-Whit oo hore uga qayb-qaatay ololaha wacyigelinta ee dadka loogu sheegayo inay guryahooda joogaan oo ee ‘Gurigaaga Joo’, isla markaana taageeray hay’adda caafimaadka UK ee NHS, ayaa hadda isagii bad ku jira.
Muuqaallo aan fiicnayn oo laga soo duubay ayaa waxay muujinayaan Morgan Gibbs-Whit oo ka qayb-gelaya xafladda Bank Holiday ee ka dhacday Greenwich oo Koonfurta magaalada London ah, waxaana inyar kaddib muuqaalladan oo barta Snapchat-ka uu soo dhigay uu masaxay markii uu arkay inuu bad ku jiro.
Waxa kale ka daran in qoraallada aan fiicnayn ee lagu soo qoray muuqaallada lasoo dhigay baraha bulshada oo ay ka muuqdeen Morgan Gibbs-Whit oo la tamashlaynaya xiddigaha hore ee Jasiiradda Jacaylka ee Georgeina Steel iyo Elma Lazar.
Tiro dad ah oo cabsan oo kor u haya koobab ay maandooriyeyaal ku jiraan oo midabkoodu casaan yahay iyo gaasta lagu sakhraamo ee la nuugo ayaa sidoo kael kasoo muuqanayay sawirrada iyo muuwaallada daawashada, laakiin lama caddaynin in Morgan Gibbs-Whit uu gaasta nuugay, sidoo kalena khamriga cabbay.
Sida uu qoray wargeyska Daily Mail, xafladdu waxay bilaabantay 6-dii galabnimo ee waqtiga UK, waxaanay socotay illaa 3-dii habeennimo ee saqdii dhexe oo ku beegan suxuurta.
Dhinaca kale, kooxda Wolves ayaa ganaax kusoo rogaysa ciyaartoygeedan iyadoo ku haysata falalka anshax xumo ee waqtiga qaldan uu ku kacay.
Wakiilka laacibkan ka tirsan xulka qaranka England ee ay da’doodu ka hoosayso 21 jirka ayaa diiday inay ka hadlaan arrintan, waxaanu ku gaabsaday: “Kama hadlayno waxyaabahan haddii ay saxan yihiin iyo haddii ay qaldan yihiin ba.”